PM Solonandrasana Mahafaly “Mila beazina sy hamoronana asa ireo malaso any atsimo”
Izao no fotoana hanomezana sehatra ny tanora raha tena hoavin’ny firenena tokoa izy ireo, hoy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly, omaly, raha nandray fitenenana tamin’ilay latabatra boribory momba ny fitadiavana tombony amin’ny fitombon’ny mponina natao tetsy Anosy.
Zava-dehibe ny famatsiana misimisy any amin’ny sehatry ny fanabeazana mialoha ny hamatsiana ny fanomezana asa ho an’ny tanora. Anisan’ny tranga ilaina jerena manokana ny mikasika ireo malaso any Atsimo, raha ny fanazavany, satria dia vokatry ny tsy fahampiana teo amin’ny fanabeazana no antony mahatonga ireo tanora efa maherin’ny 5000 hanao ny asa ratsiny amin’izao fotoana. Dieny izao isika dia mila mihetsika hitady izay vahaolana hanomezana fiofanana sy asa ho azy ireny, indrindra hamerina azy any anaty fiarahamonina indray. Misy moa ilay antsoina hoe “Alphabétisation fonctionnelle” na ny fampianarana mamaky teny sy manoratra arakaraka ny zava-misy iainan’ireo fiarahamonina hanombohana ny tetikasa.